Tobanaan Ruux oo lala xiriirinayo Al Shabaab oo lagu qabtay Magaalada Muqdisho – Samaale News
Howlgalladan oo ahaa kuwa ballaran, islamarkaana Ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay ka sameeyeen Degaano ka tirsan Degmooyinka Wadajir iyo Dharkeenleey ayaa lagu soo qab qabtay tobaan Ruux.
Ciidamada Dowladda, gaar ahaan Booliska iyo kuwa AMISOM ayaa howlgalladoodu waxey ku soo xireen tobanaan Ruux oo lagu tuhmayo in ay xiriir la leeyihiin Xarakada Al Shabaab iyo falal amaan darri oo ka dhacay Magaalada Muqdisho.
Guddoomiyaha Degmada Wadajir, Axmed Cabdulle Afrax oo la hadlayWarbaahinta Magaalada Muqdisho ayaa sheegay in baaritaanadaasi ay Xalay ka bilaawdeen qeybo ka mid ah Degmooyinka Wadajir iyo Dharkeenleey ee Magaalada Muqdisho.
Waxuu Guddoomiyaha intaasi ku daray in Dadka la soo qab qabtay ay haadan ku socdaan baaritaano, si buu yiri loo kala saaro.
Sikastaba, Weeraro iyo Qaraxyo inta badan loo adeegsado Gaari oo ay mas’uuliyadoodu sheegtaan Xarakada Al Shabaab ayaa waxey ka dhacaan qeybo ka mid ah Caasimada Dalka Soomaaliya.